Shazam Music App ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Apple Company! – AsiaApps
December 20, 2017 December 20, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on Shazam Music App ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Apple Company!
Apple company က Shazam ကိုဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့သတင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကတည်းကထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အဲ့ဒီသတင်းအတိုင်းပဲ Apple Company က Shazam ကို $400 Million နဲ့ တကယ်ဝယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Shazam Music app ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ App Store ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး Apple နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအတူတကွလုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ သမိုင်းလည်းရှိပါသေးတယ်။
Shazam ဆိုတာကတော့ Music နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ App တစ်ခုပါ။ Music ကို Download လုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲ Music နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေချင်တဲ့ အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီသီချင်းသာမက သီချင်းစာသားပါတစ်ခါတည်း ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ English, Czech, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Traditional Chinese, Turkish အစရှိတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို Support ပေးထားပြီး အဲ့ဒီထဲကမိတ်ဆွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းကို ရှာဖွေပြီး နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာခြားစကားမို့ စာရိုက်ပြီးမရှာတတ်တာတို့၊ သီချင်းနာမည်မေ့သွားတာတို့ စတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ့် function တစ်ခု Shazam မှာရှိပါသေးတယ်။ အဲ့တာကတော့ Application ထဲက “S” ပုံစံကိုဖိနှိပ်ပြီး အလိုရှိတဲ့သီချင်းစာသား (သို့) သီချင်းနာမည်ကို ပြောနိုင်တဲ့ function ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာကမိတ်ဆွေရဲ့ ပင်ကိုယ်အသံနဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပဲ အခြားသီချင်းဖွင့်ထားတဲ့ device တစ်ခုခုကို Shazam app အနားထားမှသာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဉပမာ မိတ်ဆွေက တစ်ခြား device တစ်ခုမှာ Treat you better သီချင်းဖွင့်ထားပြီး Shazam app activate ဖြစ်နေတဲ့ device တစ်ခုအနားကိုကပ်လိုက်ရင် Shazam က Treat you better သီချင်းရော lyric ရောကိုတစ်ခါတည်းရှာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Treat you better သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးထဲ က စာသားတစ်ကြောင်း (သို့) တီးလုံးကိုကြားတာနဲ့ တင်ရှာဖွေပေးနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့် Sensor ပိုင်းကတော့ကောင်းချက်ပါပဲ။
အဲ့ဒီ Function ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ Phone Setting ထဲက Microphone ဖွင့်ပြီးမှအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Wifi (သို့) Internet Connection တစ်ခုခုရှိမှသာ Shazam ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ၁၉၀ ကျော်မှာသုံးစွဲနေတဲ့ Shazam Music App ကို $400 Million အသုံးပြုပြီးဝယ်ယူထားတဲ့ Apple အနေနဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ IOS user တွေသာမက Android user တွေပါ Shazam App ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iPad news: Music app Shazam launches new features for iPhone, iPad users – Gadgets Now https://t.co/VmOpOVk47h
— iPad fans (@iPadfans) December 20, 2017
IOS အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ Application ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BlurMe!